Al-Shabaab Oo Afar Nin ku Toogatay Fagaaraha Magaalada Bu’aale.(Akhriso Magacyada) | Awdalmedia.com
Al-Shabaab Oo Afar Nin ku Toogatay Fagaaraha Magaalada Bu’aale.(Akhriso Magacyada)
Al-Shabaab ayaa fagaare ku yaalla Magaalada Bu’aale ku toogatay Afar Nin oo ay ku eedeeysay inay ahaayeen basaasiin u shaqeeya dowlada Somalia iyo dowlado kale.
Qaadiga Maxkamadda Al-shabaab ugu qaabilsan Jubbooyinka oo fagaaraha xukunka dilka ah ka dhacayay ka akhriyay waxa Ragga Afarta ah lagusoo eedeeyay ayaa sheegay in dhammaan ay qirteen dambiyada ay galeen sidaas ayaana lagu toogtay.
Fagaaraha xukunku ka dhacayay waxaa ku sugnaa boqolaal oo daawanayay xukunka toogashada ah, iyadoo saraakiil ka tirsan Al Shabaab oo ka hadlay goobtaas ay farriin adag u direen kooxo ay ugu yeereen Jawaasiista xogaha muslimiinta ugudbiya cadowga oo ay sheegeen inaaney heli doonin wax naxariis ah.
Magacyada Ragga xukunka dilka ah lagu fuliyay ayaa waxay Al-shabaab ku kala sheegtay sidatan:-
1-Cabdirisaaq Xaashi Cabbaas oo lagu eedeeyey inuu u shaqeynayay Sirdoonka Itoobiya mushaharkiisuna ahaa $200.
2-Cumar Cadar Cumar oo ahaa 25 sano jir ah waxaa lagu eedeeyey inuu u shaqeynayay ciidanka NISA ee dowladda Federaalka.
3-Max’ed Aba Mayow wuxuu lagu eedeeyey inuu u basaasayay dowladda Federaalka waxaana loo diray inuu xog ka keeno xeryaha tababarada Al-Shabaab.
4-Mustaf Macalim Xasan wuxuu u shaqeynayay sirdoonka Itoobiya waxaana lagu eedeeyey ninkan inuu ciidamada Itoobiya ku hoggaamiyay Tuulada Caliyow Doyow ee duleedka degmada Buurhakaba halkaasoo ay dad shacab ah ku dileen.
Ma ahan markii ugu horraysay oo Al-Shabaab ay xukun dil ah ku fuliso rag ay ku eedeysay iney u basaasayeenn sirdoonka dowlada Somalia iyo dowlada kale.